Khuphela kwaye ufake imixholo yeXiaomi Mi A1 (IZIKHUMBA) | I-Androidsis
Kule khosi entsha yokufundisa ividiyo ndicacisa indlela yokwenza khuphela kwaye ufake imixholo yeXiaomi Mi A1, Le mixholo okanye ulusu lusebenza kuzo zonke iXiaomi Mi A1 eqengqa uguqulelo lwe-Android Oreo, oko kukuthi, uhlaziyo lwamva nje olukhoyo kule ndawo yesiphelo ye-Android engathandabuzekiyo enye yeetheminali ezilungileyo zonyaka kunye nokumangalisa okukhulu kwexesha.
Konke oku kunokwenzeka ngenxa yomsebenzisi we Uluntu lwe-Androidsis kwiTelegram, Uluntu esele lugqithile kumalungu angama-7200 nalapho ungajoyina ngokunqakraza kule khonkco inye. Umsebenzisi ekuthethwa ngaye ngu @ Umnyama15, ethe yona yabelana ngomsebenzi we Uvavanyo loluntu lweXiaomi, umvavanyi ogama linguAndrei Ortega isebenze ezimbalwa kwaye imixholo elungileyo yeXiaomi Mi A1. Emva koko ndikushiya ikhonkco ukuze uzikhuphele kuluntu lweXiaomi uqobo kwaye, ewe, uluntu olukhulu lwe-Androidsis.
1 Uyikhuphela njani kwaye uyifake imixholo kwiXiaomi Mi A1
2 Kodwa ndiyifaka njani le mixholo yeXiaomi Mi A1?
Uyikhuphela njani kwaye uyifake imixholo kwiXiaomi Mi A1
Inkqubo ilula kakhulu kuba ngaphakathi kuseto lweXiaomi Mi A1, kwicandelo le isikrini, iinketho eziphambili, Ekupheleni kwayo yonke uyakufumana icandelo eliphantsi kwegama lika Imixholo yesixhobo, Iya kuba lixanduva lokulawula imixholo esiyikhuphelileyo sayifaka kwiXiaomi Mi A1.
Kodwa ndiyifaka njani le mixholo yeXiaomi Mi A1?
Ukufaka le mixholo yeXiaomi Mi A1 kulula njengokuba khuphela i-apk yomxholo osithandayo, (kule meko ndinokucebisa ukuba uzikhuphele zonke kuba uninzi lwazo alunakuqondwa ukuba zihamba ngegama lefayile), kwaye zifakele ngendlela efanayo xa sifaka usetyenziso olukhutshelwe ngaphandle kwiGoogle Play Store, Ukwenza ukuba imithombo yolwazi ikhethwe.
Kule meko, njengoko imixholo isingathwe kwiGoogle Drayivu, Kuya kufuneka sinike imvume yokuqhuba okanye yeGoogle ChromeKuxhomekeke kwindawo esikhuphela kuyo imixholo ukusuka kuyo, ukuze Android iphakheji yokufaka ngokuzenzekelayo ize ibonakale kwaye sinokufaka usetyenziso xa ifayile ye-apk ikhutshiwe.
Ukufikelela kwiDrayivu, kulapho umhlobo uAndrei Ortega enemixholo ayenzele iXiaomi Mi A1, onayo ngokufikelela kwi Indawo esemthethweni yaseXiaomi ukucofa kwikhonkco elifanayo o ukungena kuluntu lwe-Androidsis kwiTelegram y ukubuza malunga nemixholo yeXiaomi Mi A1.
Nje ukuba i-APK ehambelana nayo ikhutshelwe kwaye ifakwe, umxholo ekuthethwa ngawo uza kuvela kuseto lwe-Android, kwicandelo Umboniso / useto oluphambili / imixholo yesixhobo. Ngokucofa nje kumxholo esifuna ukuwusebenzisa, uya kusetyenziswa ngokuzenzekelayo.
Ngaba ubufuna okungakumbi? Ungaphoswa zezi Amaqhinga eXiaomi Mi A1.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khuphela kwaye ufake imixholo yeXiaomi Mi A1 (AMAKHUMI)
Molo! Unjani? Ndiyaphawula, ndinayo iMiA1 yam, kwaye andinalo elo candelo: S Ngaba ikwinguqulelo ye-Oreo, i-Android 8.0.0 ... Ngaba yenye yezo nkqubo zisilelayo ukuhlaziya? Ndenza ntoni ukuyilungisa?
UAndrei Ortega sitsho
Jonga ke, inqaku elinegama lam, enkosi ngokulunga.
Phendula kuAndrei Ortega
UAntonio Añasco sitsho
Oku kuyakusebenza kuguqulelo oluhlengahlengisiweyo lwe-Oreo okanye lusestokhweni, kuba ndikunye no-Oreo ngesiqwengana senyanga ka-Epreli 2018 kwaye akukho khetho lubonakalayo.
Phendula u-Antonio Añasco